UChicco uyakhuluma ngemuva kokuthi kuboshwe abantu ngokubulawa kukaSenzo | Scrolla Izindaba
UChicco uyakhuluma ngemuva kokuthi kuboshwe abantu ngokubulawa kukaSenzo
Ukuboshwa kwabantu abahlanu ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa kuzoletha ukukhululeka okukhulu emndenini kaMeyiwa ngemuva kweminyaka eyisithupha belindile.
Futhi kuyizindaba ezinkulu kundodana kaChicco Twala, uLongwe, osolwa ngokubulala unozinti weBafana Bafana ne-Orlando Pirates.
UChicco Twala ukhulume nabakwa-Scrolla.Africa ngoMsombuluko ngokukhululeka komndeni wakwaTwala ngokuthi uLongwe uzophuma kulolu daba.
Lokhu kuqhamuka ngemuva kwezinyanga eziyi-15 ngemuva kokudlula emhlabeni kukababa kaMeyiwa uSam, olwe ngokungakhathali efuna ubulungiswa bube khona ngokushona kwendodana yakhe.
USenzo wadutshulwa washona kowezi-2014 esemzini owayeyintombi yakhe e-Vosloorus, umculi uKelly Khumalo.
UTwala uthe: “Njengoba ngangazi ukuthi indodana yami uLongwe yayimsulwa kulo lonke lolu daba, umndeni wami ubungenakho ukuthula ngalezi zinsolo ezazilokhu zivela kubantu abehlukene nasezinkundleni zokuxhumana.
“Ngiyayazi ndodana yami. Ayisoze yabulala umuntu. ”
Uthe ubehlale njalo esemuva komndeni kaMeyiwa efuna ubulungiswa ngokubulawa kukaSenzo.
Okwamanje, uNgqongqoshe wamaPhoyisa uBheki Cele ukuqinisekisile ukuboshwa kwalaba bantu okwenzeka ngoMsombuluko ezifundazweni ezimbili.
“Abasolwa abahlanu bokuqala baboshwe phakathi kwehora lesishiyagalolunye neleshumi ekuseni namhlanje eGoli naKwaZulu-Natali,” kusho uCele.
Umlandeli webhola uJohn Mofokeng uthe kuyadabukisa ukuthi ubaba kaSenzo, uSam Meyiwa ushone ekhala efuna ubulungiswa ngokushona kwendodana yakhe.
“Ngiyethemba uyajabula ukubona amadoda abulala indodana yakhe esejele.”
UCele uthe banesiqiniseko sokuthi banecala eliqinile “elibhekene nabo bonke abasolwa”, wengeza ngokuthi kungenzeka ukuthi kuboshwe abanye abantu.
UKhomishana kaZwelonke weSAPS uKhehla Sitole uthe kutholakale isikhali esivela lapho okwenzeke khona lesi sigameko.
“Besilokhu sifuna lesi sikhali sonke isikhathi sophenyo futhi ngenhlanhla lesi sikhali sixhunyaniswe nesigameko.”